Ukuphefumla komhlaba ngemijikelo yonyaka yohlaza | Ukuhlaziywa okuluhlaza
Ukuchonga amaxesha onyaka asekwe kwi amaxesha onyaka, apho la maxesha sibhekisa kuwo athile iimeko zemozulu ezizinzileyo kwingingqi enikiweyo, ngaphakathi kuluhlu oluthile.
Njengoko usazi, la maxesha zii-4 (entwasahlobo, ihlobo, ukwindla nasebusika) kunye idlule malunga neenyanga ezi-3.Kwimeko apho ungazi, Amaxesha onyaka eneneni ngenxa yokuthambeka kwe-axis yomhlaba ejikelezayo ngokubhekisele kwinqwelomoya yokuhamba kwayo ngokubhekisele Sol, ngaloo ndlela kufikelelwa kwimimandla eyahlukeneyo ifumana imilinganiselo eyahlukeneyo yokukhanya kwelanga ngokuxhomekeke kwixesha lonyaka.
Ewe kunjalo ngenxa ye- ubude bemini kunye nokuthambekela kwelanga ngaphaya kolundi.
1 Ukuphefumla komhlaba
2 INOAA STAR
3 Imijikelo yonyaka yotyani
5 Umceli mngeni omkhulu
Kodwa andizukuthetha nawe malunga namaxesha onyaka ngokubanzi kodwa malunga Imijikelezo yamaxesha otyani.
Ngotshintsho lwamaxesha Utyani bukwatshintsha nemijikelo yazoIngakumbi kumacala aqhubekayo kwi-ikhweyitha.
Umzekelo, xa kufika ikwindla izityalo igama Amagqabantshintshi aphulukana namagqabi ukubabuyisa kamva xa kungena intwasahlobo.
Ukuntshula kweembewu, ukukhula kwazo, ukulahleka kwamagqabi, iintyatyambo, njl. ziyinxalenye yemijikelo yonyaka yotyani.
Thina, ndithetha ukuba abantu ngokubanzi, baqale ukuphazamisa kakhulu kule mijikelo yamaxesha onyaka, nangona kunjalo, bayabonakala kwaye basishiya nemifanekiso efana nale ndiza kukubonisa yona ngokulandelayo.
Ngale ndlela sinokubona ifayile ye- Imijikelezo yamaxesha otyani ayikho enye into ngaphandle kokubona i umhlaba "uphefumla" nobomi. Ukusukela, Zonke izinto eziphilayo zixhomekeke kule mijikelo ekukhuleni kwezityalo, nokuba kukutya, ioksijini nokunye okuninzi.
Akukho mntu u-Bremer udale uthotho lwemifanekiso esibonisa "ukuphefumla" koMhlaba ngale mijikelo yonyaka yotyani unyaka wonke.
Idatha ivela INOAA STAR, izicelo zesathelayithi kunye nendawo yophando, ethi Sebenzisa i-VIIRS sensor (Visible Infrared Imager Radiometer Suite) on the SNPP (Suomi National Polar-Orbiting Partnership) satellite ukufumana ulwazi oluneenkcukacha malunga notyani loMhlaba wethu veki nganye.
Imijikelo yonyaka yotyani
Kwimephu yakho ungabona iifayile ze- Imijikelezo yamaxesha onyaka ngokusebenzisa Iiveki ze52 yexesha elinonyaka, ngakumbi le mifanekiso imele 2016.
Ukunyuka kunye nokuwa kokukhula kohlaza kwi-hemisphere esemantla zibonakala ngokukodwa.
Nangona kunjalo, njengoko iindawo ezahlukileyo zeplanethi zibonisa, eminye imijikelo kunye namaxesha abonwa nawo.
Imimandla yaseNew Zealand, eBrazil nakumazantsi eAfrika Banomjikelo obuyela umva kulawo aseMantla.
Kukwajongwa nendlela e-India imeko-bume eyomileyo eqala ngayo iimvula.
Umahluko othile onokuthi ubonwe kwimephu ubiziwe "Uhlaza", okanye ngokwemigaqo yesayensi, yi Umahluko oQhelekileyo woLungelelwaniso lwemifuno (SMN).
Oluhlaza kunokusetyenziselwa ukuqikelela ukuqala kunye nokuthamba kwenani lezityalo, ukuqala kwexesha lokukhula, kunye nezigaba zeephenological.
Kwimimandla engenatyani (intlango, iintaba eziphakamileyo, njl. Njl.), Amaxabiso abonakalisiweyo abonisa imeko yomphezulu.
Umceli mngeni omkhulu
Ukudalwa "kokuphefumla" koMhlaba ngokwamaxesha onyaka otyani kube ngumceli mngeni omkhulu ukusukela oko oopopayi benziwe ngemijikelezo engama-50.000 52 ehambelana neeveki ezingama-XNUMX zonyaka.
Yonke into yahlulwe ngokobukhulu obahlukeneyo, imibala kunye ne-opacities ke ngoko ziye zafundwa Iindlela ezi-3 ezahlukeneyo ukubona ukuba yeyiphi enokuthi ifane naleyo yendalo ude ufumane isiphumo osibonayo ngasentla.
Kwaye ukuba usenomdla wokubona umahluko ngokweenkcukacha ezingaphezulu ungayibona ingxelo ecothayo apha, nangona ndikuxwayisa ukuba kuyinyani ukuba iyacotha kuya kufuneka ube nomonde ekuboneni iiveki ezingama-52.
Njengoko bekulindelekile kwaye sinombulelo kuncedo lukaNadieh Bremer singawonwabela lomsebenzi apho sijonga ngokucacileyo ukuba utyani busebenza njani njengomphunga weplanethi kwaye kufuneka sibakhathalele kwaye sibakhusele ngazo zonke iindleko.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhlaziywa okuluhlaza » Yendalo » Ukuphefumla komhlaba ngemijikelo yonyaka yohlaza
Ukufumana amandla ahlaziyekayo elwandle